Urur ay ku bahoobeen Injineerada Somaliland oo lagu dhawaaqay | Somaliland.Org
April 28, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Urur ay ku bahoobeen Injineerada Somaliland, ayaa shalay lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa.
Xaflad loo sameeyay ku dhawaaqista ururka Somaliland Engineers Association oo lagu qabtay Hargeysa, waxa ka qaybgalay Wasiir kuxigeenka Hawlaha guud Cabdirisaaq Cawil Bacaluul, guddoomiyaha hay’adda Shaqaalaha dawladda Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen (Cadami), Agaasimeyaasha guud ee Beeraha iyo Hawlaha guud, xubnaha aasaaska ururka lahaa iyo marti sharaf kale.
Ugu horayn, Xuseen Sheekh Aadan oo ku hadlayay magaca aasaasayaasha ururka SLEA oo hadal ka jeediyay munaasibadaas, waxa uu faahfaahin ka bixiyay samaynta ururkaas. “Ururkan Injineerada Somaliland waxaanu bilawnay in ku dhaw sideed sano ka hor. ilaa maalintaa ilaa maanta itaalkayaga waanu isku dayayno oo waanu wadnay, hase yeeshee duruufaha jira awgood noomay suuro galin. Maanta hawsha waxa noo hirgaliyey oo wax wayn nagala qabtay Injineeradeeda, Wasaaradda iyo hay’adda ILO oo nala hirgaliyey, maantana xafladaani waa tii aanu ugu dabaal degaynay dhalashadii ururka Injineerada Somaliland,” ayuu yidhi Mr. Xuseen.
Agaasimaha wasaaradda Hawlaha guud Cabdilaahi Sh. Cabdisalaan Cali Jawhar oo hadal ka jeediyay halkaas, waxa uu sheegay inay muddo badan ka shaqaynayeen sidii loo samayn lahaa ururkaas. “Ururka Injineerinku waa wax aad u qiimo badan, dalna wuxuu ku hormaraa sida dadkiisa aqoonta uu uga faaiidaysto. Run ahaantii Wasaarad ahaan waxaanu ka shaqaynaynay in badan inaaanu samayno ururkan, anagoo la kaashanay niman Injineero ah oo ku baraarugsanaa in badan sidii loo samayn lahaa…Marka aynu ka hadalno faaiidada ururada, maanta dalka waxa ka taagan aqoon-darro xaga dhismaha oo kale maanta ninka wastaadka ah ayaa la leeyahay Injineer, arrintaana wixii lagaga bixi lahaa waxaan u arkaa inay tahay ururkan, waayo ururku waa dadkii aqoonta lahaa ee markay noqoto mashaariic dalka lagu hormariyo waa raggii samayn lahaa ee hagi lahaa horumarka dalka,” ayuu yidhi Agaasimuhu.
Masuul ka socday hay’adda Shaqaalaha Adduunka (ILO) oo isna munaasibadaa hadal kooban ka jeediyay, ayaa ka waramay gacanta ay hay’ad ahaan ka geysteen aasaaska ururkaas.
Guddoomiyaha hay’ada Shaqaalaha dawlada Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen (Cadami) oo isna halkas ka hadlay, waxa uu soo dhaweeyay aasaaska SLEA. “Warbxinihii waxa ku jiray sideed sanadood inaad rafanayseen, waan garan karaa markaa in tacab badani ku jiro, markaa dadka u soo samray ee ka hadhi waayay ee niyad jabi waayey ee maanta soo gaadhsiiyey inaynu u dabaaldegno xafladii lagu furayey aad baan u bogaadinayaa. Somaliland intay jirtay ururo badan ayaa la aasaasay oo samaysmay, qaar badan oo ka mid ahi way fashilmeen oo may ay raagin. Waxa laga yaaba hadii aynu nidhaahno maxay u fashilmeen kuwii fashilmay inay daraasad u baahan tahay, waxaan ku rajo weynahay maadaama aad tihiin aqoonyahano inaad daraasad samayseen, daraasadaasi waxay idiin soo saaraysaa waxay kuwii fashilmay ku fashilmeen, waxay kuwii guulaystay ku guulaysteen. Markaa idin ka fili maayo inaad laab lakac ku samaysateen ururkan, filina maayo inuu ka mid noqdo kuwa fashilma ee waxa aan filayaa inuu noqdo kuwa guulaysta,” ayuu yidhi guddoomiyuhu.
Ugu dambayn, Wasiir ku-xigeenka Hawlaha guud Cabdirisaaq Cawil Bacaluul oo hadal ka jeediyay xafladaas, waxa uu sheegay in ururkani yahay mishiinkii dhaqaajin lahaa hawlaha wasaaraddaas.
Wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay in Injineeradu qaybta ugu muhiimsan ka yihiin hawlaha Wasaaradda Hawlaha guud qaranka u hayso.
Previous PostUCID oo sheegay haddii uu talada qabto in uu fasaxi doono furashada Idaacadaha xorta ahNext PostDALJIRE: Xeerka Anshaxa Mafrishka	Blog